Qandhada La-gooyo La-qaadan Karo La-qaadan Karo - Elcelott-Dredges
Ellicott Dredges waa soo saare qodqodeeya naqshadeynta iyo dhisida noocyo kala duwan oo yar yar iyo dhexdhexaad cabbirka cutterhead nuugista. Doomahayagu waxay awood u leeyihiin inay soosaaraan noocyada iyo carada cufan ee la duubay, sida carada, quruuruxa, carrada, iyo dhoobada.
Taxanaha 1270 Dragon® Dredge
Xaashi gaar ahEeg Virtual Travel
Qulqulatooyinka 'Dragon® Cutterhead'
Doomaha goos gooska ah ee la qaadi karo ayaa la dhisay ilaa-ugu dambayn, si fudud loo hawlgalo, waxayna bixiyaan wax soo saar aan xad lahayn. Ellicott's Dragon® taxanaha taxanaha ahi wuxuu ka kooban yahay qolal la jaro oo la qaadan karo oo la jaan qaadi kara kuwaas oo ku habboon dhowr arji oo qodis ah, sida macdanta, hagaajinta deegaanka, iyo mashaariicda soo celinta xeebta
La qaadi karo & Waara
Ellicott marinnada la goyn karo ee la goyn karo waxaa lagu heli karaa cabbirro kala duwan iyo qodis qoto dheer. Maraakiibtaan raagaya waxay leeyihiin nashqado culus oo xaqiijinaya badeecada wax soo saarkoodu dheeryahay iyo soo laabashada sare ee maalgashiga. Mid kasta oo ka mid ah mashiinnada wax lagu gooyo ee la qaadan karo waxaa loogu talagalay gaadiid fudud, isu imaatin iyo dayactir fudud.
Tusaalooyinka Ellicott ee Portable Cutterhead Dredges waxaa ka mid ah Ellicott Series 370 Dragon® dredge, oo ku habboon hawlwadeenkii ugu horreeyay ee qashin qubka. Taxanaha 670 Dragon® Dredge wuxuu ku habboon yahay marinnada iyo dekedda mashaariicda wuxuuna bixiyaa taangiyo dherer dherer buuxa leh oo xasilloonida iyo meel bannaan oo lagu daro. Kuwa qandaraasleyda ah ee raadinaya ceel biyood oo bixiya heerar waxsoosaar sareeya oo ku saabsan codsiyada qoto dheer ee qotada dheer iyada oo aan la helin dhibaatada ka soo baxday Matar Pump, waxaana loo tixgeliyaa inay tahay meesha ugu habboon ee laga qodo macdanta iyo mashaariicda dib u soo celinta dhulka, laga yaabee in taxanaha Ellicott 870JD Jet Dragon® Dredge uu noqon doono a taam weyn oo loogu talagalay xirfad-yaqaanka xilliyeed. Dhammaan meelaha la geyn karo goos gooska madaxa ee la qaadan karo waxaa lagu sameeyaa xarumaheena wax soo saarka ee Baltimore, Maryland iyo New Richmond, Wisconsin.